जस्तो सुकै दुखमा पनि निराश हुँदैनन् यी ४ राशि, पत्थरबाट पानी निकाल्नु परे पनि पछि हट्दैनन् ! – Media Np Online
मुख्य पृष्ठ /News/जस्तो सुकै दुखमा पनि निराश हुँदैनन् यी ४ राशि, पत्थरबाट पानी निकाल्नु परे पनि पछि हट्दैनन् !
ज्योतिष शास्त्रमा १२ वटा राशिको छुट्टै स्थान हुने गर्छ। राशि अनुसारको भाग्य मात्र नभई व्यवहार पनि फरक हुन्छ। एक राशि र अर्को राशि बीच व्यवहारमा धेरैनै फरक हुन्छ भने ग्रहहरुको असर पनि फरक-फरक रहने गर्छ।
ग्रहहरुको असरकै कारण निम्न उल्लेखित राशि भएका व्यक्तिहरु हत्त-पत्त निराश हुँदैनन्। यी राशि हुनेहरु दुखको समयमा पनि सकारात्मक रहने गर्छन्।
यस राशि हुनेहरु जीवनमा जहिले पनि सकारात्मक रहने प्रयास गर्छन्। ठूलै दुखमा पनि खुसि र सफलताको बाटो खोज्ने यिनको बानि हुन्छ। मेष राशि हुनेहरु जे हुन्छ राम्रैको लागि हुन्छ भन्ने सोच्छन्। यहि कारणले गर्दा मेष राशि हुनेहरु असफलताकै सहारामा सफलता सम्म पुग्न सफल हुन्छन्।
प्राय आफूलाई शान्त राख्न प्रयास गर्ने कन्या राशिका व्यक्तिहरु देख्दा बाहिर संवेदनशिल देखिएता पनि भित्रबाट भने समझदार हुन्छन्। यस राशि हुनेहरु हार मान्नै सक्दैनन्। ठूला समस्यालाई पनि समस्या रुपमा लिएर अगाडी बढ्ने बानिले नै कन्या राशि हुनेहरुलाई सफलता दिलाउने गर्छ। दुख पछि सुख आउँछ भन्ने आशावादी प्रवृत्तिको कारण कन्या राशि हुनेहरु जीवनमा सफल हुन्छन्।
कुम्भ राशि हुनेहरु आत्मविश्वासको मामलामा धेरै अगाडी हुन्छन्। दुख देखि नभाग्ने भएकै कारण कुम्भ राशि हुनेहरु जीवनमा कहिले पनि निराश हुँदैनन्। जति नै दुख परेपछि आफ्नो उद्देश्य देखि बिमुख नहुनाले पनि कुम्भ राशि हुनेहरु अन्य भन्दा फरक हुन्छन्। सकारात्मक मनोवृत्तिकै कारण कुम्भ राशि हुनेहरु सफलताको पर्याय बन्न सक्छन्।
मकर राशि हुनेहरु सुख र दुखलाई समान महत्व दिन्छन्। सुख र दुख जीवनका नछुट्ने पाटोलाई राम्रोसँग बुझेर हरेक काम गर्ने यिनको बानि हुन्छ। यहि कारणले गर्दा मकर राशि हुनेहरु सजिलै निराश हुँदैनन्। दुखमा पनि आफूलाई कसरी सकारात्मक राख्ने भनेर निक्कै विचार गर्ने हुँदा पनि मकर राशिहरु अन्य भन्दा भिन्न हुन्छन्। गार्हो परिस्थितिमा पनि सफलता पाउने भोकको कारण पनि यी निराश हुँदैनन्।
‘चौकी जाँदा हामी तपाईंको निवेदन लिन सक्दैनौं भने। यहाँ भिडभाड नगर्नुस्, जिल्ला जानुस् भनेका थिए।’